May 2019 - ReaderGonnaRead
မိကျောင်းဆွဲခံထားရတဲ့ သားဇောနဲ့ ကိုယ့်အသက်ကို မငဲ့ဘဲ ရေထဲဆင်းပြီး မိကျောင်းနဲ့ ပြိုင်ဖိုက် ဖက်ကိုက်ကာ သားကို ပြန်လုတဲ့ ဖခင်…
mrminyan May 31, 2019
အသက် ၁၂အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Diego Abdulhasan နဲ့ မိသားစုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Palawan ဒေသရှိ Balabac ကျွန်းမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၅ရက်နေ့ညနေ ၆နာရီလောက်မှာ ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့အတူ အိမ်နားကသူတွေနဲ့ရေဆင်းကူးနေတုန်း Diego ကိုရေအောက်ကတစ်ခုခုက ဆောင့်ဆွဲသလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုက်ဆွဲလိုက်တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် အရမ်းနာကျင်ပြီး သူ့ကိုကိုက်ဆွဲထားတဲ့အရာကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မိကျောင်းတစ်ကောင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ Diego…
မချယ်ရီ မြေမြုပ်ထားသည့် ရွှေ(၇)ကျပ်သားကို တူးယူသွားခဲ့သည့်တရားခံအား ဖမ်းဆီး
မြန်မာနိုင်ငံသူ ချယ်ရီ မြေမြုပ်ထားသည့် ရွှေ(၇)ကျပ်သား အား တူးယူသွားခဲ့သည့်တရားခံအား ဖမ်းဆီး ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုင်းမီဒီယာတွေမှာ သတင်းကြီးနေတဲ့နကော်နယုတ် ခရိုင်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ မချယ်ရီ အသက် (၂၇) ရဲ့၁၀ နှစ်တာ စုဆောင်းထားခဲ့ရတဲ့ ရွှေ (၇) ကျပ်သားပျောက်ဆုံးသွားတဲ့…
“အို” သွေးပိုင်ရှင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်(၇)ချက်
အချစ်ရေး အဆင်ပြေဖို့ဆိုရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် နားလည်ပေးဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူကို နားလည်ဖို့ဆိုရင် သူ့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အမူအကျင့်လေးတွေကို သိမှဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အိုသွေး ပိုင်ရှင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်ထားရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုသိထားမှ သူတို့လေးတွေကို နားလည်ပေးနိုင်မှာပါနော်။ (၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူလေးတွေ…
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျော်ကြားဆုံးထဲကဖြစ်တဲ့ ပင်းတယ လှိုဏ်ဂူ၏ အံ့ဖွယ် ထူးခြားချက်​များ (သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတပါ)
ပင်းတယလှိုဏ်ဂူ ၏ ထူးခြားချက်​များ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျော်ကြားဆုံး (၁၀)နေရာထဲက တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သည့် ပင်းတယဂူ၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွား စာမျက်နှာများပေါ်များတွင်ထင်ရှားဖော်ပြခဲ့သည့် ပင်းတယဂူသည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ပင်းတယမြို့တွင်တည်ရှိသည်။ ပင်းတယဂူသည် ထုံးကျောက်တောင်တွင် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် ဘူမိဗေဒသက်တမ်းနှင့် ဆိုလျင် လွန်ခဲ့သော နှစ် သန်း ၂၀၀ တည်းက ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ြ်မင့်မားတဲ့ တောင်စောင်းကနေ…
သင့်ကောင်လေး သင့်ကိုပြောပြမှာမဟုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ခု
mrminyan May 30, 2019
ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေဆီက ဘယ်လိုအရာတွေမျှော်လင့်လဲ? ယောက်ျားလေးတွေ ဘာကြိုက်တတ်လဲ? ယောက်ျားလေးတွေ စိတ်ဝင်စားအောင် ဘာလုပ်သင့်လဲ? စသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ချစ်သူကောင်လေးက သူ့ကောင်မလေးကို ဘယ်တော့မှ ပြောပြမှာ မဟုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကို သိချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ၁. သင့်ချစ်သူဖြစ်ရတာကို သဘောကျတယ် မိန်းကလေးအများစုထင်ကြတာက…
သီလရှင်ထွက်စ ကတုံးလေးနဲ့ အရမ်းလန်းပြီးဂေါ်နေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ပုံရိပ်တွေ
အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ အဆွေးသီချင်းတွေကို ခံစားချက်အပြည့်ထည့်ပြီး သီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်မလေး ပိုပိုကတော့ သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေ၊ ဆန်းသစ်တဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားအားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ မေလ (၂၁) ရက်နေ့မှာ သာသနာ့ဘောင်ထဲကို ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယနေ့လူထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကတုံးလေးနဲ့ အရမ်းလန်းပြီးဂေါ်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို…
ရဲရင့်အောင်က သူမရဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးပုံလေးနဲ့ ဆေးထိုးလိုက်တာကြောင့်စိတ်ကောက်သွားတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
ရဲရင့်အောင်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ အသည်းစွဲအားပေးခဲ့ရတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရဲရင့်အောင်ရဲ့ အချစ်သီချင်းလေးတွေ အဆွေးသီချင်းလေးတွေဟာ ယခုအချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို တိုးဝင်စေပြီး နားထောင်လို့ ကောင်းနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထာကျကျဖက်ရှင်လေးနဲ့ အသံချိုချိုလေးကြောင့်လည်း နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်နေရတာပါ။ ရဲရင့်အောင်နဲ့ဧငြိမ်းဖြူတို့အတွဲလေးဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့စုံတွဲလေးအဖြစ်ပရိသတ်တွေသတ်မှတ်ထားကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွဲလေးဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ပဲ သာယာပျော်ရွှင်သော…
ကျောင်းဖွင့်ပြီး နှစ်ပတ်ကြာအထိ ကျောင်းမအပ်သေးသည့် ကလေးများကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ခေါ်ယူမည် …..
mrminyan May 29, 2019
ကျောင်းဖွင့်ပြီး နှစ်ပတ်ကြာအထိ ကျောင်းမအပ်သေးသည့် ကလေးများကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ခေါ်ယူမည် ….. အခြေခံပညာကျောင်း များတွင် မေလ ၂၅ ရက်က ကျောင်းအပ်စတင်လက်ခံနေပြီး ကျောင်းဖွင့်ပြီး နှစ်ပတ်ကြာအထိ ကျောင်းမအပ်သေးသည့် ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ပူးပေါင်း ကာ အိမ်တိုင်ရာရောက်ခေါ်ယူ မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြား…
ဒီနေ့တစ်နေ့တာအတွက် သင်ကြုံရမယ့် အချစ်ရေး ဗေဒင်
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့မွေးရာသီခွင်အလိုက် မတူညီတဲ့ ကံကြမ္မာတွေ၊ မတူညီတဲ့ ကံတွေရှိနေပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ရာသီခွင်အလိုက် ဒီတစ်နေ့အတွက် ကြုံတွေ့ရမယ့် သင့်ရဲ့အချစ်ရေးဗေဒင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီး မှန်မမှန်ပြောသွားပါဦးနော်။ (1) Aries (March 20 – April 20) ဒီနေ့မှာ ချစ်တဲ့သူကို သေချာဂရုစိုက်မိမှာမို့ နှစ်ယောက်လုံးပျော်ရွှင်ရမှာပါ။ အရင်က အမှတ်တရလေးတွေကို…
ကြည့်နေရင်းနဲ့အသည်းတွေယားပြီးချစ်မဝဖြစ်စေမယ့် သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းရဲ့သားလေး Peach Lay ရဲ့ချစ်စရာ Video
ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးနဲ့တူတူပရိသတ်တွေအားကျလောက်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့သင်ဉ္ဇာနွယ်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်တုန်းကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးခုအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာပေမယ့်ပရိသတ်တွေကချစ်ပြီး ခုချိန်ထိအားပေးနေတာပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားလေးကလည်းဖေဖေမေမေတို့ရဲ့အချစ်တွေသာမကပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုလိုက်ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေတင်ပေးလေ့ရှိပြီးပရိသတ်တွေအားကျနေရတာပါ။သူတို့မိသားစုလေးကတော့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နွေးထွေးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေအားကျနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ Peach လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို မေမေသင်ဉ္ဇာနွယ်ဝင်းက တင်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ မေမေသင်ဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကတော့ ” မန္တလေးရောက် Peach လေးစတိုင် ” ဆိုပြီးလူမှုကွန်ယက်မှာဝေမျှထားတာပါ။ မန္တလေးရဲ့အပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ Peach လေးတစ်ယောက်တော့ အကျီလက်ပြတ်လေးနဲ့နေနေရတာပါ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း peach လေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို အားပေးကြပါဦးနော်။ Source-…